फलफूलमा आत्मनिर्भरको नाराः १२ अर्बको फलफूल आयात गरेर खान्छन नेपाली
काठमाडौं । नेपालमा फलफूल उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने नारा सरकारले अघि सारेको छ । जनतालाई आबश्यक फलफूल स्वदेशमै उत्पादन गर्ने उद्धेश्यले सरकारले कार्यबिधि बनाएको छ । तर फूलफूल आयातको अबस्था हेर्ने..
डडेल्धुरा । केही वर्षपहिले सम्म जङ्गलमा नै बसी जङ्गली कन्दमूल, गिट्ठा भ्याकुर खाएर जीविकोपार्जन गरिरहने राउटे जातिका मानिसलाई नेपाल सरकारले पुनःस्थापना गरेपश्चात् व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ उन्मुख भएका थिए । जङ्गली..
​तरकारीले बजार नपाउँदा किसानको चिन्ता बढ्यो
डडेल्धुरा । जिल्लाका दुर्गम गाउँमा उत्पादन भएको तरकारी बजारमा खपत नहुँदा कृषक चिन्तित बनेका छन् । तरकारी व्यवसायबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि अधिकांश कृषक खेतीबाली छोडेर व्यावसायिक रुपमा तरकारी उत्पादनतर्फ उन्मुख..
​६ वर्ष इजरायल बसेर फर्केका केसीले खोले १० लाखको कृषि फार्म
पर्वत । रोजगारीका निम्ति छ वर्षसम्म इजरायलमा बसेर फर्किएका राम्जादेउराली गाविस– ९ का रमेश केसीले १० लाखको लागतमा कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन्। एक वर्ष अघि १५ रोपनी जग्गामा फार्म स्थापना..
​मनकामनाको सुन्तला भनेर व्यापारीले कतै तपाईंलाई झुक्याएका त छैनन् ? अब यसरी चिन्न सकिन्छ
गोरखा । तपाईं मनकामनामा उत्पादन भएको रसिलो सुन्तला खान चाहिरहनुभएको छ तर व्यापारीले अन्यत्रकै सुन्तला दिएर मनकामनाको हो भन्दै ढाँटेका छन् भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन । तपाईंले चाहेअनुसार नै..
​अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएका बाख्राबाट जन्मिने पाठापाठी मर्ने समस्या
धनगढी । प्रविधि प्रसारका लागि अष्ट्रेलियाबाट ल्याइएका उन्नत जातका बाख्राका पाठापाठीमा रोग लागेर मर्ने समस्या देखिएको छ। कैलालीको बुढेतोलास्थित बाख्रा विकास फर्ममा अष्ट्रेलियाबाट ल्याएर पालिएका‘अफ्रिकन ब्वायर‘ जातका यी बाख्रा ब्याउँदा दुईदेखि..
करीब पाँच अर्ब ५० करोडको मल आयात
काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयले अहिले रासायनिक मलको अभाव नरहेको बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। योगन्द्र कार्कीका अनुसार डिएपी, पोटास र युरिया मलको अभाव हुन नदिनका लागि कृषि सामग्री..
ललितपुरमा यसरी फस्टाउँदै छ कफी व्यवसाय
ललितपुर । ललितपुरमा अर्गानिक कफीको व्यवसायिक उत्पादन हुन थालेको छ। यस व्यवसायवाट कृषकले वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न समेत सफल भएका छन्। कफी खेतीका लागि किसानले आफ्नै वा अरुको जग्गा भाडामा..
एमए पढेका चेली इजरायलतिर, तालिम लिँदै मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म कमार्इ
धुलिखेल । शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत प्युठानकी मीना थापा आधुनिक कृषि प्रविधि सिक्न चाँडै इजरायल जाँदै छिन् । कृषि प्रविधिमा विश्वप्रख्यात इजरायली शैक्षिक प्रतिष्ठानमा सीप सिक्ने अवसर पाउँदा उनी निकै उत्साहित..
कृषिमा कमाल, माटो बिनै नेपालमै फल्न थाल्यो काँक्रो, ३५ दिनमा खानयोग्य
बनेपा । तपाई पत्याउनुहुन्छ ? कुनै कृषि उपजको उत्पादन माटो बिना पनि हुन्छ भनेर । तर काभ्रेपलाञ्चोकमा एकजना कृषकले जिल्लामै पहिलो पटक माटो बिना नै काँक्रो उत्पादन गरेका छन् । जिल्लाको..
​ग्रामीण कुखुरा प्रवर्द्धन कार्यक्रम लागु, एक वर्षपछि अन्डामा आत्मनिर्भर
काठमाडौँ । नेपालले आगामी एक वर्षभित्र अन्डा आयात गर्नु नपर्ने भएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी एक वर्षभित्र देशलाई अन्डामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यअनुसार साउनदेखि ग्रामीण कुखुरा प्रवर्द्धन..
​७ अर्बको कृषिजन्य वस्तु उत्पादन
इलाम । इलाममा यो वर्ष रू सात अर्ब बराबरको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार अलैँंची, अदुवा, आलु, ओलन, अमिृसो, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी गरी रू..
​व्यावसायिक कृषिको भरपर्दो विकल्प बन्दै पाउलोनिया, विरुवा बेचेरै ४५ लाख आम्दानी
पोखरा । व्यावसायिक कृषिको भरपर्दो विकल्पका रुपमा पाउलोनिया खेतीले स्थान पाउन थालेको छ । पछिल्लो समयमा विभिन्न फलफूलमा देखिएका रोगका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण परम्परागत रुपमा लगाइएका फलफूल एवम् रैथाने वनस्पति..
ख्यातिप्राप्त क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट फर्केर गाँउमै बाख्रापालनमा व्यस्त
भैरहवा । विदेशको ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका नेपाली फर्केर बाख्रा पालन गरिरहेका छन् भन्दा जो कोहीलाई आश्चर्य लाग्नसक्छ । तर, बेलायतको लन्डनस्थित क्याम्ब्रिज यूनिभर्सिटीबाट बिजनेस म्यानेजमेन्टमा पोस्ट ग्र्याजुयट..
​नेपालकै उत्कृट माटो रुकुममा भेटियो
रुकुम। खाद्यान्न तथा नगदेबाली उत्पादनका लागि रुकुमको माटाको उर्वराशक्ति मुलुककै उत्कृष्ट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको पहल र अगुवाइमा रुकुमको कृषि प्रणालीमा सुधार ल्याई कृषकको जीवनस्तर..
व्यावसायिक कुखुरापालनबाट ३३ अर्ब ७२ करोड आम्दानी
चितवन । नेपालमा व्यावसायिक कुखुरापालन फार्महरुले मासु, अन्डा र चल्ला बिक्रीबाट एक वर्षमा ३३ अर्ब ७२ करोड ४० लाख २३ हजार रूपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको..
​नेपाल अन्डा, मासुमा आत्मनिर्भर उन्मुख, एक वर्षभित्र अन्डामा, दुई वर्षमा मासुमा र तीन वर्षमा दूधमा
काठमाडौँ । नेपाल अन्डा तथा मासुमा आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र नेपाल पोल्ट्री महासङ्घको आयोजनामा आज भएको नतिजा सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा तथ्याङ्क विभागका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले..
बालुवामा परबल फलाए सप्तकोसी डुबान क्षेत्रका किसानले, दुई विगाहामा २ लाख कमाए
याम प्रधान इटहरी । श्रीपुर–६ का किसान देवनारायण मुखिया सप्तकोसी नदी किनारको दुई बिगाहा जमिनमा लगाइएको परबलको खेतीले राम्रो आम्दानी दिने भएपछि दङ्ग छन् । आफू त्यति जमिनबाट सबै खर्च कटाएर एक..
चौंरीगाईको दूध बेचेर लखपति, घरमै मासिक दुई लाखसम्म आम्दानी
रसुवा । चौंरीगाईको दूध बेचेर मासिक रु एक लाख ५० हजारसम्म कमाइ हुन्छ भन्ने कुरा धेरै मान्छेलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । तर, रसुवाको गत्लाङका किसान चौंरीगाईको दूध बेचेर लखपति भएका..
​खडेरीका कारण साढे २ अर्ब रुपैया बराबरको बालीनाली, फलफूल नष्ट
जनकपुरधाम । खडेरीका कारण यस वर्ष धनुषामा दुई अर्ब ६७ करोड १९ लाख बराबरको आँप, लिची, खरबुजा, मुङ्गको दाल तथा वर्षे तरकारी नष्ट भएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार..
​सरकारको विशेष योजनापछि माछा उत्पादन बढ्यो, ९ हजार टन उत्पादन
वीरगन्ज । पर्सामा वार्षिक करिब नौ हजार मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन थालेको छ। सरकारले अभियानमुखी मत्स्य कार्यक्रम तथा माछापोखरी निर्माण विशेष योजना लागु गरेपछि यति धेरै परिमाणमा माछा उत्पादन हुन..
चितवनमा एक किलो मासुलाई ४ हजार, एउटा बोका नै ९ लाख रुपैयाँको
नारायण ढुँगाना चितवन । बोकाको एक किलो मासुको मूल्य कति ५ सय, ६ सय वा ८ सय। ठाउँ अनुसार फरकरफरक मूल्य पर्ला। तर चितवनमा एक किलो मासुको मूल्य झन्डै चार हजार..
​३४ करोड बढीको केराखेती नष्ट
चितवन । आइतबार राति आएको हावाहुरीले जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा लगाएको केराखेती नष्ट भएको छ । केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष विष्णुहरी पन्तका अनुसार जिल्लाका रत्ननगर, पिठ्वा, जगतपुर, जुटपानी, पदमपुरलगायत क्षेत्रका क्षति पुगेको..
​हावाहुरीबाट करोडौँको केराखेती नष्ट, मेहनती किसानलाई ऋण माथि ऋण
राजविराज । मङ्गलबार राति आएको हावाहुरीबाट सप्तरीको पूर्वी भेगमा हजारौँ बिघामा लगाइएको केराखेती नष्ट भएको छ । सप्तरीको भारदह–१ स्थित कोसी पलारको हजारौँ बिघा, हनुमाननगर योगिनीमाई नगरपालिका–२ स्थित कोसी पलारमा..
​पाँच युवाले सुरु गरे सामुहिक बङ्गुरपालन
वालिङ । दिनहुँ सयौँ युवा रोजगारका लागि विदेशिएका बेला वालिङ नगरपालिका तथा थुमपोखराका पाँच जना युवाले बङ्गुरपालन व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन्। दुई वर्षअघिबाट उनीहरुले २७ लाखको लागतमा व्यवसाय सुरु गरेका हुन्।..
स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेका युवा, कृषि व्यवसायबाटै मालामाल
धनकुटा । स्नातक तथा स्नातकोत्तर गरेपछि जागिर नै खानु पर्छ भन्ने मान्यतालाई चिर्दै धनकुटामा यस्ता युवा पशुपालन व्यवसाय तथा पशुजन्य उद्योग सञ्चालनतर्फ लागेका छन् । एक बर्ष यता मात्रै धनकुटामा २०..
​रसियामा डाक्टर बन्न छाडेर बाख्रा र कुखुरा पाल्दै थापा
रामपुर । मदनपोखरा– ९ तिनकुने टोलका हरि थापा डाक्टरी पढाइ छाडेर अहिले पशुपालनमा लागेका छन् । एमबिबिएस पढ्नका लागि रसिया पुगेका थापाले डाक्टरी पढाइ छोडेर गाउँमै आएर बाख्रा र कुखुरा..
​माछामा आत्मनिर्भर बन्न पकेट क्षेत्र विकास गरिने
रुपन्देही । माछा उत्पादनबाट आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले रुपन्देहीका तीनवटा क्षेत्रलाई पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ । जिल्लाको धकधई, लुम्बिनी र छपियालाई पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न जिल्ला कृषि विकास..
कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन 'पेन्सन' व्यवस्था
पाल्पा । सरकारले किसानलाई चार प्रकारमा वर्गीकरण गरेर निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्ने भएको छ। कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ पाल्पाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषि पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउनका लागि..
विद्युत् प्रयोग नगरी भेरीको पानी तानेर सिँचाइ
जाजरकोट । सदरमुकामसँगै जोडिएको रिम्ना गाउँमा जमिन धेरै भएपनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा स्थानीयवासी हैरान भएका थिए । अहिले पश्चिम उच्च पहाडी गरिबी निवारण आयोजनाको सहयोगमा भेरी नदीबाट पानी तानेर सिँचाइ..
Results 344: You are at page4of 12